Alshabab oo shaaciyey muuqaalka Sahal Camow oo Mareykanku sanadkii hore ku dilay Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Filim muuqaal ah oo gaaraya ilaa 20 daqiiqo oo Alshabaab soo saareen ayaa waxaa looga hadlay sarkaal muhiim u ahaa oo bihsii Janaayo ee sanadkii hore diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanku ku dileen gobolka Shabeellaha Hoose.
Sarkaalka filimha looga hadlay ayaa la oran jiray Sahal Al-Ansaar oo loo yaqaano Camow, sidoo kale waxaa ninkaas dadka qaar u yaqaaneen ‘Isku-dhuuq”. Magaciisa saxda ahna waxaa lagu sheegay Axmed Cabdulqaadir Cabdullaahi.
Cajalkan cusub ee ay soo saartay Alkataa’ib oo ah garabka warbaahineed ee Alshabaab ayaa lagu muujiyey muuqaalo tusinaya Sahal Camow. Sidoo kale waxaa muqaalka lagu arkayaa darawalkii lala dilay ee lagu magacaabi jiray Maxamed Ismaaciil.
Filimka ayaa sidoo kale muujinaya nin Alshabaab sheegeen inuu ahaa ninkii fududeeyey weerar xagga cirka ah ee lagu dilay Sahal Camow.
Ninka muqaalkiisa lasoo bandhigay waxaa magaciisa lagu sheegay Cumar Maxamed Khery, oo ka tirsanaa Alshabaab, balse ay sheegeen inuu ahaa jaasuus Mareykan.
Cumar waxa uu ka sheekeynayaa qaabkii ay weerarka u soo abaabuleen. Ninkan ayaa al-Shabaab ku eedeeyeen in uu ahaa cadow iyaga ku dhex-jirey.
(Ninka Alshabaab sheegeen inuu ka dambeeyey dilka Sahal Camow)
Ninkaani wuxuu ka sheekaynaya xildhibaan hore oo lahaa hindisaha lagu diley Sahal al-Ansaari oo loo yaqaan Camow.
Siyaasiga lahaa isku xirka isla markaana uu sheegay in uu qalabka diyaaraddaa signalka siinaayey u soo dhiibey ayaa ah nin si weyn looga yaqaano Baay & Bakool.